Norway: Qoxootigan ayaan mudnaan iyo tixgalin gaar ah siin doonaa. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Norway: Qoxootigan ayaan mudnaan iyo tixgalin gaar ah siin doonaa.
War saxaafadeed kasoo baxay dowlada Norway, ayaa lagu sheegay in dowlada Norway ay tixgalin iyo mudnaan gooni ah siin doonto dadka qoxootiga ah ee katirsan dadka marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan LGBT-Community. Marka ay Norway qiimeyneyso qoxootiga ay kasoo qaadaneyso xeryaha qoxootiga aduunka, si dib u dajin iyo nolol siin loogu sameeyo.
LGBT ayaa ah wadarta magacyada loo soo gaabiyo dadka loo yaqaan Lesbian(Gabdhaha gabdhaha ka helo) Gay(Raggaa ragga kale ka helo), bisexual(Dadka rag iyo dumarba jinsi ahaan ka helo) iyo transgender(Labeebshe).
Norway ayaa sheegtay in wixii hada ka bilowdo dadkaas la siin doono tixgalin gooni ah, marka ay Norway soo qaadaneyso qoxootiga ku sugan xeryaha qoxootiga caalamka ah.
Horey waxey Norway galin gooni ah siin jirtay haweenka nugul iuo caruurta.
Xigasho/kilde: Regjeringen vil prioritere LHBT-flyktninger
Previous articleXiligan ayuu dhaqangali doonaa shardiga luuqada ee qaadashada dhalashada Norway.
Next articleIsbadal lagu sameeyay adeega boostada Norway: Labadii maalinba, hal mar.